Maevatanana : MD ireo sinoa nampiasa pasipaoro sandoka | NewsMada
Maevatanana : MD ireo sinoa nampiasa pasipaoro sandoka
Naiditra am-ponja vonjimaika (MD) ao Maevatanana, omaly ireo sinoa roa lahy tsy manana “visa” sy nampiasa pasipaoro sandoka tratran’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny “Brigade police de la route” Maevatanana, ny 18 novambra 2017 maraina teo.
Nosavain’ny zandary ny fahazoan-dalana mitondra fiarakodia an’ny sinoa iray nitondra fiarakodia, saingy tsy afaka nampiseho izany izy satria tsy manana. Nojeren’ny zandary koa ny momba ny fahazoan-dalan’izy ireo mipetraka eto Madagasikara “visa de séjour” dia efa lany tamin’ny 14 novambra 2017 teo ny an’ny iray raha nampiseho pasipaoro tsy azy fa an’ny sinoa hafa kosa ilay namany iray.
Notazonin’ny zandary avy hatrany izy roa lahy ka natao famotorana ka maromaro ny fandikan-dalàna nataon’izy ireo tamin’io fotoana io. Nanamafy hatrany ny zandary fa marolafy ny andraikitra sahanin’izy ireo na ambanivohitra na an-drenivohitra.